Waxaan aragnay sida maalgashadayaasha maanka ku haya ay u dhisi karaan kaabayaasha cusub ee suuqa. McKnight wuxuu codkiisa u adeegsanayaa maalgaliye hay'adeed si uu u guto qaybteena si loo dhiso suuqyo badan oo hufan, oo waxtar leh.
Inkastoo aan ka shaqeyneyno maalgaliyeyaal badan oo adeegsanaya adeegsade-yaasha oo leh barnaamijyo aad u dheer, saameynta maal-gashadu wali waa aag cusub oo ficil ah. Taas macnaheedu waa qiimaha macaamilka iyo kharashka shaqaalaha ee lagu ogaanayo iyo xidhitaanka heshiisyada waxay noqon karaan kuwo qaali ah. Waxaan rajeyneynaa in aan la shaqayno aasaasaha kale ee maanka ku haya waxay ka caawineysaa in ay gaarsiiyaan karti badan iyo natiijooyin ka sii wanaagsan sidii ay ula macaamili lahaayeen ujeedooyinka barnaamijka ee la xiriira portfolios.
Ballan-qaadkayaga waxbarashadu wuxuu ka koobanyahay derbiyadii ururkeenna, waxaana rajeyneynaa in furitaanka khibradaheena ay faa'iido u yeelan doonto maalgeliyeyaasha hay'adaha kale.
Intaa waxaa dheer, sida ka qaybgalayaasha suuqyada, waxaanu la joognaa siyaasiyiinta iyo nidaamiyeyaasha maaliyadeed, waxaanan ku biiri karnaa maalgashadayaasha hay'adaha kale (sida bangiyada, maamuleyaasha hantida, miisaaniyadda hawlgabka, iwm) si loogu dhiirrigeliyo ficilka, oo aan inta badan ku dhex marno Shabakada Maalgashiga Khatarta Cimilada. Tusaalooyinka ficilada suuqa ee dhawaa waxaa ka mid ah:
Dawladaha G7 iyo G20 si ay u taageeraan tallaabada cimilada:
Bisha May 2017 anaga ku biiray 217 maalgashadayaasha oo ugu baaqaya dawladaha ugu awoodda badan adduunka inay abuuraan qorshooyin cimilada fog iyo qorshaha cimilada muddada fog iyo bartilmaameedyada gaaska korontada. Nidaamka noocan ahi wuxuu muhiim u yahay calaamadaha suuqyada ee ku saabsan halka laga maalgaliyo marka aynu u wareegno dhaqaale hooseeya. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida aan sidan u samaynay tan dhowaan boostada by Elizabeth McGeveran.
Guddiga Suuqa & Sarrifka Mareykanka ayaa u baahan:
Shirkadaha dawlada ah ee ganacsiyada ah si ay u soo bandhigaan khatarta bulshada iyo khatarta deegaanka 8-K. Isbarbardhiga, xogta macno leh waa lagama maarmaan dadka maalgashadayaasha ah si ay u sameeyaan go'aano wargelin. (Akhriso warqad ka timid madaxwaynihii hore ee McKnight Kate Wolford.)
Waxaan sidoo kale taageernaa ururada kor u qaadaya soo bandhigidda shirkadaha. Horraantii 2015, McKnight waa la taageeray CDP (horeyba mashruuca Daabacaadda Carbon). Waxaanu ku biiray in ka badan 700 oo ah maal-gashadayaal oo matala $ 92 + trillion oo shirkad ah si ay u shaaciyaan gaaska dabeeysha gaaska. Waa talaabo yaryar, laakiin ururin badan falalka yaryar oo ay weheliyaan dadaallo adag waxay sameyn kartaa isbeddel.